Taageerada u soo celinta qaxootiga Soomaalida iyo dadka ku barakacay gudaha iyada oo loo marayo hab bulshada ku wajahan dib u dhexgelinta bulshada ee Soomaaliya
Horyaal: Taageerada u soo celinta qaxootiga Soomaalida iyo dadka ku barakacay gudaha iyada oo loo marayo hab bulshada ku wajahan dib u dhexgelinta bulshada ee Soomaaliya.
Guddiga: Wasaaradda Federaalka Jarmalka ee Iskaashiga Dhaqaalaha iyo Horumarinta (BMZ)
Hay'adda fulinta: Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka
Muddo Guud: 2015 ilaa 2017
Xaaladda bani'aadamnimada ee dadka Soomaaliyeed weli waa mid quus oo sabab u ah in ka badan 20 sano oo dagaal sokeeye ah. Xaaladda waxaa sii xumeeyay muddo dheer oo abaaraha, daadaadka ee webiyaha sanad walbo iyo hilaac oo si joogto ah u sababiyay dalagga soo go'aya. Dadka Soomaaliyeed ma awoodaan inay helaan nololeedkooda u gaar ah.
Tirada sii kordhaysa ee qaxootiga kusoo noqonayaan bulshooyinka ay kasoo jeedaan markii la hagaajiyay xaaladda ammaanka ee gobollada ka dib, waxuu keenay culays dheeraad ah oo ku saabsan xaaladda cuntada. Tani waxaa lagu sii daray dadka gudaha ku barakacay (IDPs) oo uqaxay meelo kale oo dalka oo ammaan ah ay sabab u tahay colaad iyo cunto yaraan. Duulitaan iyo barakac darteed, ma haystaan saldhig ay ku soo saaraan cuntada iyo dhalinta dhakhliga.
Nololeedyada dadka soo noqday, barakacayaasha iyo dadka deegaanka ee bulshooyinka martida laga doortay oo hagaagtay.
Iyado loo marayo tallaabooyin loogu talagalay oo si degdeg ah loo arki karo, mashruuca ujeedadiisu waxay tahay in la dhiso isku halleeynta bulshooyinka bartilmaameedka ee Degmada Kismaayo ee Jubbada Hoose iyo Mamuulka deegaanka.
Tani waxay muhiim u tahay guul hawlgelinta dhexaad iyo dheeraad ee Soomaaliya.
GIZ waxay la shaqaysaa mashaariicda ay bilaabeen ururada caalamiga ah kuwaas oo mar hore labilaabay oo iskaashanaayo ururada aan dawliga ahayn ee degaanka bulshada iyo kaabayaasha soo saar leh - tusaale ahaan, iyada oo gacan ka geysaneysa dayactiridda ceelasha iyo waddooyinka.
Marka lagu daro ka qabashada dhibaatooyinka bani'aadamnimo oo ba'an, Mashruucan wuxuu xooga saarayaa yareenta xiisadii ka dhaxeysay dadka ku soo noqday dalkooda, barakacayaasha iyo dadka deegaanka. Isla mar ahaantiina, waxuu xoojina waxtarka maamulka degmada. In sidaas la sameeyo, waxay qaadanaaysa habab loogu talagalay in looga hortago dhibaatooyinka iyo dhisida nabadda.
Mashruucu wuxuu xooga saarayaa saddex qeybood oo ka mid ah Hawlaha
Taageerista bulshooyinka la doortay oo ku sugan dadaalkooda ay ku dhexgaliyaan dadka ku soo noqday dalkooda iyo dadka barakacayaasha ah.
Hubinta haqab-beelka cuntada ee dadka ku soo noqday dalkooda, barakacayaasha iyo dadka deegaanka.
Taageerista isku dhaca badalka oo rabshada laheyn ee degaanka.
Mashruucu wuxuu leeyahay hab isku dhafan oo ku lug leh dhammaan kooxaha bartilmaameedka iyo dowladda go'aamada gaara. Si loo balaariyo fursadaha iskaashiga oo loo gaaro natiijo joogtaysan, waxaa gaar ahaan muhiim ah in mashruucan la dhafo si karti soo gelin hadda jira qaababka isuduwidda caalamiga ah.